Semalt: Izinzuzo eziyisithupha ze-Web Scraping For Business
I-Web scraping yiyona ndlela evumela ukuthi sikhiphe idatha kusuka kumawebhusayithi ahlukene ngokushesha futhi ngendlela ephumelelayo. Lokhu kuzuzisa ukuqala, abathengisi, ochwepheshe bezokuxhumana, abacwaningi be-intanethi, abafundi, othisha, abahleli, abathuthukisi, nabangekho izinhlelo. I-web scraping iqinisekisa ukunikezwa kwedatha yekhwalithi esikhathini esifushane.
Izinzuzo eziyinhloko zokuhlunga iwebhu zichazwe ngezansi.
Akungabazeki ukuthi ukubhula iwebhu kuyindlela engabizi ukuze uthole idatha efundekayo - gemeinde hedingen entsorgung winterthur. Inani elikhulu lezinsizakalo zokukhwabanisa zitholakala kuyi-intanethi, kufaka phakathi ukungenisa. Io, okwenze kube lula kuwe ukuthi ukhiphe idatha kumakhasi wewebhu oyifunayo mahhala. Ngakho-ke, ukuhlunga kuhle kakhulu ukuqala kanye nabafundi abangafuni ukusebenzisa imali eyengeziwe kwi-extractors yedatha.
2. Uma usukhethile ukukhipha idatha yakho oyintandokazi noma uhlelo lwe-web scraping, ungakhula ibhizinisi lakho futhi ungathola imali eningi.Lokhu kungenxa yokuthi amasevisi we-web ukusula kanye nezinhlelo zokusebenza kulula ukuwasebenzisa futhi ungahlanganiswa nazo zonke iziphequluli zewebhu nezinhlelo zokusebenza. Bangakwazi ukuskena bese bekhipha amakhasi ambalwa kubhulogi yakho noma yonke indawo ngaphandle kwenkinga.
3. Ukunakekelwa okuphansi kuyadingeka futhi isivinini esikhulu siqinisekisiwe
Siyabonga, izinhlelo eziningi zokuqamba idatha zenziwe kuze kube manje. Badinga ukusekela okuphansi noma akukho ukuhlinzeka futhi banikeze kahle idatha ekhishwe futhi ehlelwe kahle. I-ParseHub uhlelo olunjalo olungadingi ukugcinwa isikhathi eside futhi luthembisa imiphumela emihle. Amasevisi we-Web scraping angathatha isikhathi esifushane ukukhipha idatha yakho futhi angcono kakhulu kunezinkambiso zedatha yokukhipha idatha.
Ukukhwa kweWebhu kuqinisekisa imiphumela eqondile neyiqiniso, futhi kungcono kunendlela yokwakheka kwebhulaki. Amanye amathuluzi we-web scraping ayashesha futhi anokwethenjelwa. Banikeza idatha ewusizo phakathi kwemizuzwana futhi ungashiyi amaphutha kumbhalo wakho. Isizinda esifanele sedatha yisimfuneko esiyisisekelo samabhizinisi. Uma ubhekene nezintengo zokuthengisa noma izinombolo zendawo yokuhlala, kufanele ukhethe uhlelo lwakho lwe-web scraping noma isofthiwe ngokuhlakanipha.
5. Kulula ukuhlaziya
Noma ubani ongeyena ochwepheshe futhi onolwazi, ithuluzi lokulahla lilula futhi lingasetshenziswa ngokulula. Akudingeki ufunde ezinye izilimi ezinjenge-C ++ noma i-HTML ukuze uzuze ku-software yokuhlunga. Ngaphezu kwalokho, idatha engenamaphutha iqinisekisiwe, futhi amaphutha ampela okupela isipelingi asheshe ahlelwe, okwenze kube lula kuwe ukuhlaziya amakhasi wewebhu ngekhwalithi.
6. Londoloza isikhathi sakho
Uma uqala, kufanele ube nezinto eziningi ongayenza. Uzohlala umatasa ngokumaketha nokukhuthazwa kwebhizinisi lakho futhi awukwazi ukuchitha isikhathi sokukhipha idatha yedatha. Ukusebenzisa amathuluzi okwenza okulungile, ungagcina kokubili isikhathi sakho namandla. Isibonelo, i-Connotate wuhlelo olunzulu olunembile lwe-web scraping olungadingi noma iyiphi ikhodi futhi ingakhipha inombolo enkulu yamakhasi wewebhu ngamaminithi amabili nje. Lokhu nakanjani kusindisa isikhathi. Ngomuthi ofanele wamathuluzi, ungakwazi ukusula yonke iwebhusayithi. Idatha itholakala kumafomethi afanelekayo kuphela.